MW Farmaajo oo Kulan la Yeeshay Madaxda Warbaahinta Gaarka Loo Leeyahay - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
MW Farmaajo oo Kulan la Yeeshay Madaxda Warbaahinta Gaarka Loo Leeyahay
MUQDISHO(HALBEEG)-Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabbilay qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay.
Madaxweynahaha ayaa ugu horreyn madaxda warbaahinta ugu hambalyeeyey Maalinta Caalamiga ah ee Xorriyadda Saxaafadda.
Madaxweynaha ayaa kulanka ka dhex muujiyay sida ay Dowladda Federaalku uga go’antahay dhowrista xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda.
“Anigoo magacayga ku hadlaya, waxaan rabaa inaan idiinku hambalyeeyo Maalinta Caalamiga ah ee Xorriyadda Saxaafadda. Annagu waxaan aamminsannahay in saxaafaddu ay xor noqoto, Sida aad idinku qirteen waxaa hubaal ah in xilligan la idiin la macaamilo si ka wanaagsan sidii hore” ayuu yiri madaxwynuhu.
Waxa uu madaxweynuhu hoggaanka warbaahinta madaxa bannaan ku boorriyay in ay kaalin ka qaataan ka run sheegidda xaaladda dalka iyo ilaalinta sumcaddiisa
“Waxaan idinku boorrinayaa in aad sii labo jibbaartaan dadaalkiinna idinka oo sawir qurux badan ka gudbinaya dalka, xoojinaya midnimada, waddaniyadda iyo dal jacaylka.”
Waxa uu tilmaamay in Dowladda door muhiim ah siisay horumarinta saxaafadda, iyada oo dadaal ku bixisay ilaalinta xuquuqda Warbaahinta lana meel mariyey shuruuc iyo xeer ilaaliye u gaar ah saxaafadda si looga hortago tacaddi iyo meel-ka-dhac kasta oo ka dhan ah warbaahinta.
Dhankooda, madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa Madaxweynaha la wadaagay in ay laga ma maarmaan tahay in Dowladdu ay xaqiijiso xorriyadda iyo madax-bannaanida warbaahinta, waxa ay sidoo kale soo gaarsiiyeen dhacdooyin iyo falal ay tabasho ka qabeen, iyaga oo codsaday in arrimahaas wax laga qabto.
Ugu dambeyn Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay shaqada wanaagsan ee ay Warbaahinta Soomaaliyeed u hayso dalka waxa uuna ku ammaanay doorka wanaagsan ee ay ka qaateen dowladd dhiska, wacyi gelinta bulshada, la dagaallanka afkaarta xagjirka iyo taabbo-gelinta dimuqraadiyadda.
The post MW Farmaajo oo Kulan la Yeeshay Madaxda Warbaahinta Gaarka Loo Leeyahay appeared first on Halbeeg News.